ရာဇဝင်ကိုဖြတ်သန်းခြင်း ၉ ရုပ်မြင်သံကြားခေတ်ရာဇဝင်	15Apr11
နောက် အရေးကြီးတဲ့ရင်းမြစ်တခုက ယူကျုခေါ် အင်တာနက်ဗီဒီယိုတွေပါပဲ။ အများပရိသတ်ကို ဖလှယ်ချင်တဲ့ သတင်းဗီဒီယို သီချင်း မေးမြန်းခန်းစတာတွေကို အင်တာနက်မှာ အခမဲ့လွှင့်တင်၊ အခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်ရတာမို့ ဗဟုသုတရှာဖွေရာမှာ အင်မတန်အရာဝင်ပါတယ်။ ခေတ်ဟောင်းသီချင်း ရုပ်ရှင်တွေလဲအများကြီးမို့ လူကြီးတွေလဲ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ မင်းသားမောင်တင်မောင်ဆိုတဲ့ ဘရဏီလို လူသိများတဲ့ အနောက်တေးသွား မှီးယူစပ်တဲ့သီချင်းမျိုးတွေကို သူတို့မူရင်းသီချင်းတွေ လိုက်ရှာနားထောင်ရင်း တခြားခေတ်ဟောင်းတေးတွေရဲ့ မူရင်းသီချင်းတွေကိုပါ သိလာရတာမျိုးကလဲ ပျော်စရာပါပဲ။ ပြည်လှဖေရဲ့ ရွှေတံငါရဲ့ မူရင်းဟာ ခေတ်ဟောင်းအင်္ဂလိပ်သီချင်း Kitty from Kansas City ၊ သုမောင်ရဲ့ ပန်းတွေနဲ့ဝေဟာ WithaSong in My Heart ၊ ဘိလပ်ပြန်သန်းရဲ့ မြပန်းခွေမူရင်းက ဘာဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ နောက် မြန်မာတွေ ကူးယူမှီငြမ်းတတ်တဲ့ အနောက်တိုင်း ရုပ်ရှင်ကားတွေ လည်း ယူကျုမှာရှိပါတယ်။ ချစ်အမျှ၊ ဂုဏ်ရည်မတူ၊ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦး၊ မာလာရီ၊ ဖိုးပြုံးချို စတဲ့ တခေတ်တခါက မြန်မာပြည်မှာ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ မူလအမေရိကန်ကား၊ ကုလားကား၊ အမှီး လမ်းကြောင်းတူတဲ့ ထိုင်းကား၊ ဂျပန်ကား၊ ဟောင်ကောင်ကားစတာတွေပါ ယူကျုလို ဗီဒီယိုဆိုက် တွေမှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေမှာလဲ မြန်မာအမျိုးသမီး ဝင်းမင်းသန်း အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဂရေဂရီပက် နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ခရမ်းရောင်လွင်ပြင် Purple Plain လို၊ ရှားပါးတဲ့ Burmese Harp မြန်မာ့စောင်းလို ဂျပန်ကားတွေ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှတ်တမ်း သတင်းကားတွေ၊ Who Killed Aung San? လို ဘီဘီစီမှတ်တမ်းကားတွေ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ် ဒဂုန်တာရာစတဲ့ မြန်မာစာရေးဆရာကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခန်းတွေကိုလဲ ယူကျုမှာ ကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။ အလားတူ သင်္ကြန်မိုး၊ မောင်တို့ချယ်ရီမြေ၊ ပန်းပန်လျက်ပါလို နာမည်ကြီးမြန်မာရုပ်ရှင် ကားဟောင်းတွေအပါအ၀င် ၁၉၈၀ကျော်က မြန်မာ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်ဟောင်းတွေ၊ ကြော်ငြာဟောင်း တွေကအစ တင်ပေးနေတဲ့ မြန်မာယူကျုသမား တွေလဲရှိပါတယ်။
ရှေ့တပတ်မှတော့ ဒီကနေ့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကွန်ယက်ပေါ်က သမိုင်းစုံထောက်နည်းတွေ ကို မြည်းစမ်းကြတာပေါ့။ နားဆင်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Share this:ShareFacebookPrintEmailTwitterLike this:Like Loading...
Filed under: education, history, radio talk	| LeaveaComment	No Responses Yet to “ရာဇဝင်ကိုဖြတ်သန်းခြင်း ၉ ရုပ်မြင်သံကြားခေတ်ရာဇဝင်”	Feed for this Entry